PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - Inyanga iveza okusha ngoMroza nengoma
Inyanga iveza okusha ngoMroza nengoma
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-08 - IZINDABA -
SEKUVELE inyanga ezishaya isifuba ethi iyona eyenze iculo likaMroza elithi Van Damme lidle umhlanganiso emisakazweni yakwiSABC.
UThulani Nkwanyana odume ngelika-3 Seconds waseMatshana eMpangeni owayengumshayisibhakela, uthe uMroza wafika kuyena efuna amlungisele izinto zakhe ukuze zibe mhlophe.
Ithe lo mculi ubethatheka kancane kodwa ngemuva kokumlungisa zikhanyile izinto zakhe.
Ikusho kwagcwala umlomo ukuthi kwenzeka zonke lezi zimaga kuMroza ngaleli culo kungenxa yayo, ngoba ikhiphe isikhwakhwalala edlala abantu.
“UMroza wafika kimina elethwe umalume wakhe, ekhala ngokuthi izinto zakhe azicaci futhi nabantu abamqashi kodwa bathi akanandise mahhala. Ngivele ngakhanyisa izibani nje ngambhekela izinto zakhe. Ngimtshele okumele akwenze ngaphinde ngamhlanza ukuze izinto zimkhanyele. Emva kwalokho uqashiwe wakhokhelwa uR15 000. Emva kwalokho kwamina bengingasalali ngisebenza izinto zakhe ngoba bengifuna aphumelele. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ubonile okwenzekile ngengoma yakhe uVan Damme. Uma uzobheka kahle le ngoma iyafana nezinye, akukho simanga esitheni kodwa mbheke la ekhona manje,” kusho u-3 Seconds.
Uthe akuyena yedwa uMroza kubaculi asebeke bafika kuyena kodwa bayafika nabanye, bahambe beyolungisa abatshele ukuthi bakwenze, bangabe besabuya.
UMroza uvumile ukuthi umazi kudala u-3 Seconds kodwa wathi akayona inyanga yakhe.
“Ngamazi engakawenzi lo msebenzi, ngamvakashela nasekhaya. Ukuba uyinyanga yami, ngabe ngike ngacula ngisho nangaye. Ngicela singaphambuki ngalolu daba, sibhale okungekona. U-3 Seconds akayona inyanga, ungudokotela.”
Umphathi wezinhlelo emsakazweni Ukhozi FM, uZandile Tembe ukuchithile ukuthi kwasebenza umuthi ukuze le ngoma iwine.
“Ingoma yavotelwa kakhulu futhi namavoti ayo asiwafihlanga. Okomuthi angazi kuqhamuka kuphi manje. Le nyanga ethi iyona eyenza ukuthi ingoma iwine kwakumele isho ingakawini ukuthi izowina le ngoma. Abantu bayithandile bayivotela ingoma,” kusho uZandile.
Le ngoma ihlukanise unyaka emsakazweni Ukhozi FM yaphinde yanqoba nakwiSABC Summer Song ngokuvotelwa eziteshini ezingu-18 zakwaSABC.
Okudidayo ngayo wukuthi abanye abantu bebengayazi njengoba baqale badideka ngesikhathi kumenyezelwa ukuthi iyona ewinile. Labo abangayazi bathi babelindele ukuthi yingoma ethwele igqomu, baphoxeka sebeyizwa kanti abanye bajabula.